Shacbigu Ninka Ay Jecelyihiin Way Doortaan, Waana Madaxweyne Siilaanyo, kii la tartamayaana ha sugo laba sanno ayaa u hadhaye! | Salaan Media
Shacbigu Ninka Ay Jecelyihiin Way Doortaan, Waana Madaxweyne Siilaanyo, kii la tartamayaana ha sugo laba sanno ayaa u hadhaye!
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, dhaqanka iyo Wacyigelinta Somaliland Md. Cabdilaahi Maxamed Daahir (Cukuse) ayaa shalay jawaab ka bixiyay eedaymo uu Guddoomiyaha xisbiga UCID u jeediyay Madaxweynaha Somaliland Iyo Wasiirkiisa Madaxtooyadda.
Wasiirka Warfaafintu waxa uu sidaasi ka sheegay khudbad uu ka jeediyay Kulan balaadhan oo uu xarunta wasaaradaasi kula yeeshay shaqaale weynaha ka hawl-gala qeybaha kala duwan ee wasaaradda.
Wasiir Cabdilaahi Cukuse oo daba socday eedaymihii Faysal Cali Waraabe waxa uu yidhi “Waxaad arkaysaa dalkeena qof caqliga shacbiga caayaya oo caqliga dawladda caayaya oo caqliga ummadda caayaya oo inta uu makarafoon soo istaago siyaasi ah oo odhanaya halkan dawladdi kama jirto, oo odhanaya Madaxweynihii qaranka loo doortay ma hayo shaqadee ee waxa haya hebel qof kale ayuu sheegayaa. Dhaqanka noocaas ah Suxufiga wanaagsani ma faafiyo suxufiga wanaagsani haddii uu madax banaan yahay iyo haddii uu mid dawladeed yahayba ma faafiyo warka noocaas ah.”
“Arrintaasi dhaqan wanaagsan ma aha in ummadda la caayo ma aha, Madaxweynaha Somaliland waa madaxweynihii uu la sharaxnaa ee doorashadii isaga (Guddoomiyaha UCID) 100% foodka kaga helay. Markaa inuu yidhaahdo ma shaqaynayo dadku ninka ay jecel yihiin way doorteen waana Madaxweyne Axmed Siilaanyo, isagaana xilka haya. Eedaymaha noocaas ahina qaranimadda ceeb iyo waxaan la qaadan Karin ayay ku tahay,”ayuu yidhi Wasiirka Warfaafintu.
Wasiir Cabdilaahi Cukuse waxa uu ka hadlay Wasiirka Madaxtooyadda oo uu ku tilmaamay Wasiir Isaga la mid ah, hase yeeshee leh mustaqbal soo ifaya, isagoo arrintaas ka hadlayayna waxa uu yidhi “Wasiirka Madaxtooyaddu, Waa Wasiir Aniga ila mid ah, Waa Wasiir Wasiirrada ka mid ah, laakiin mustaqbal ifaya ayuu leeyahay, Ninka Xaasidka ahna waxaanu leenahay ILAAHII abuurtay ayaa mustaqbalkaas ifaya ugu deeqay, ugu ducee, ku kaalmee habaarka ka daa maxaad u xaasidaysaa?.”
Wasiirka Warfaafinta waxa uu sheegay In Wasiir Xirsi ILAAHAY siiyay karti ka weyn xilka Wasiirnimo, iyaguna ay soo dhawaynayaan, waxaanu yidhi “Wasiir Xirsi Mustaqbal Wasiirnimaddan ka weyn ayuu leeyahay oo uu ILAAHAY siiyay oo ifaya, Annaguna waanu soo dhawaynaynaa. Qof kasta oo muwaadin ah oo reer Somaliland ah oo karti noocaas oo kale ah la yimaadana ILAAHAY ha u siyaadiyo, ma xaasidayno Annaggu. Ka xaasidayana waxaanu leenahay ILAAHAY uurkaaga biyo qabow ha ku shubo oo ILAAHAY calooshaada ha hagaajiyo.”